DRK908F Yarn Evenness Evaluation Platform (Blackboard Method)
DRK908F Yern Evenness Evaluation Platform (Blackboard Method) inoshandisa nzira yekuongorora yakazara kuona kuenzana uye kunaka kweshinda pabbhodhi zvichienzaniswa nemhando yehutarisiro hwemhando yesamples kuti iongorore kunaka kweshinda pabhodhi.
DRK908H Yarn Kunyange Chiedza Chinobva Bhokisi (blackboard nzira)
DRK908H shinda yakaenzana mwenje sosi bhokisi (blackboard nzira) inoshandiswa kuongorora kuenzana kweshinda kuenzana uye huwandu hwese hwema neps.Miyero inowirirana: GB/T9996.2 uye mamwe maitiro.Zvimiro: 1. Tafura yemuenzaniso inogadziriswa nemaprofayiri anokosha anotengeswa kunze kwenyika, zvinhu zvakareruka uye nzvimbo yacho inotsvedza;2. The reflector mukati chiridzwa inogadziriswa ne electrostatic spraying;3. Nyore kuisa uye kutsiva mwenje;technical parameter: 1. Chiedza sosi: chena fluorescent chubhu, ...
DRK908J Yarn Even Light Source Bhokisi (blackboard method)
DRK908J warn kunyangwe light source bhokisi (black board method) inoshandiswa kuongorora kuenzana kweshinda yeblack board uye huwandu hwese hwema neps.
Inokodzera kuyera hunyoro (kunyorova kudzoreredza) kweshinda yakachena kana yakasanganiswa, axis, jira, dehwe, nezvimwe zvedonje, polyester, yakanaka, acrylic, yerineni, velvet, mvere, etc. Iyo yakakwirira-frequency scanning inogona kupinda 50mm. chechinhu chakapimwa kuyera mwando.
123456Next >>> Peji 1 / 102